उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो, के-के भयो खुला? (सूचीसहित) - Dainik Online Dainik Online
उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो, के-के भयो खुला? (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७७, बुधबार ७ : ३२
यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा थोरै परिवर्तन गरिएको छ।
यसअघि टेक अवे, स्टार्ट अप र होम डेलिभरी सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो भने खाद्यान्न पसलहरू बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिइएको थियो।
अब बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइने भएको छ।
बैंकलगायतका नियमित सेवा प्रदायक संस्थाहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि पीसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ चाहिने छ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि तोकिएका र अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्ति र अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नेबाहेक कोही पनि बाहिर निस्किन पाउने छैनन् । अत्यावश्यक सेवाको हकमा पनि १२ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका नागरिक तथा दीर्घरोग भएका व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन पाउनेछैन ।
तोकिएको र अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। अत्यावश्यक सामग्री लगायत मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा समेत निषेध गरिएको छ। यसरी आएका सवारकिा चालक सहचालक अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।
उपत्यकामा तोकिएका बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न पाइँदैन। कोभिड­१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटो सहितको परिचयपत्रका आधारमा सञ्चालन हुने बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरु भेला हुन भीडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न पाइँदैन। परम्परागत रुपमा र दैनिक रुपमा भई आएको र दैनिक हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन तथा जमघट, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विममिङ पुल, जीमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय तथा चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
शैक्षिक संस्थाहरु, प्रशिक्षण केन्द्रहरु, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षालगायत जमघट हुने गतिविधिसमेत सञ्चालन गर्न पाइँदैन । फुटपाथ वा खुला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय तथा कवाडी सङ्कलन, होटल रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न पाउनेछैन । अत्यावश्यक कामका लागि घरबाहिर निस्कनु परेमा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरु उपर कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ।